एनआईसी एशिया बैंकले ४७ लाखको चेक लुकाउँदा एक हजार बालबालीकाको पोषण भत्ता गायब ! | Diyopost - ओझेलको खबर एनआईसी एशिया बैंकले ४७ लाखको चेक लुकाउँदा एक हजार बालबालीकाको पोषण भत्ता गायब ! | Diyopost - ओझेलको खबर
एनआईसी एशिया बैंकले ४७ लाखको चेक लुकाउँदा एक हजार बालबालीकाको पोषण भत्ता गायब !
दियो पोस्ट बिहिबार, साउन २१, २०७८ | १२:३४:१३
जाजरकोट, २० साउन । एनआइसी एशिया बैंकको लापरबाहीका कारण जाजरकोटका करिब एक हजार जना बालबालिकाले पोषण भत्ता नपाउने भएका छन् । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयकै बद्मासीका कारण ती बालबालीकाहरु पोषण भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।
जिल्लाको भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ८, ९, र १० का ९ सय २० जना बालबालीका पोषणभत्ताबाट बञ्चित भएका हुन् ।
बालबालीकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सरकारले ५ वर्ष मूनिका बालबालीकालाई पोषणा भत्ता दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८को पोषण भत्ता भेरी नगरपालिकापनि वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । बालबलीकाले मासिक चार सयका दरले पाउँदै आएका उक्त भत्ता यसअघि नगदै बुझाउने गरिएपनि सरकारले यस वर्षदेखि भने बैंकमै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । वडा समितिहरुले बैंक आफै रोजेर खाता खोल्ने प्रक्रिया थालेका थिए । ती वडाहरुले नेपाल बैंक,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोल्ने निर्णय गरेका थिए ।
अन्य बैंकहरुले खाता खोलेर बालबालीकाकै खातामा रकम पठाएपनि एनआईसी एशिया बैंकले भने लापरबाही गरेको पाइएको हो । भेरि नगरपालिकाले गत असार २९ गते नै चेक काटेर सबै कागजात सहित रकम जम्माका लागि एनआईसी एशिया बैंकमा पठाएको गाउँपालिकाका फोकल पर्सन केदार कार्कीको दाबी छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटिएको चेक १५ दिन भित्र साट्नु पर्नेहुन्छ । तर, एनआइसी एशिया बैंकले १५ दिनसम्म चेक नकाटी लापरबाही पूर्वक राखेपछि रकम जम्मा हुन नपाएको हो । नगरपालिकाले दिएको ४७ लाखको चेक साउन १२ गते अघि नै साटिनुपर्ने थियो । तर, बैंकले लापरबाही गर्दा चेकनै नसाटिएको हो ।
बैंकका कर्मचारीले पोषण भत्ताको चेक लुकाएर राखेको आरोप छ । समय सकिएपछि बैंकका म्यानेजर खगेन्द्र मल्ल लगायत नगरपालिकाका कर्मचारीले हारगुहार गरेका थिए । बैंकका शाखा प्रमुख मल्लका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयकै लापरबाहीका कारण यस्तो घटना भएको हो ।
बिहिबार, साउन २१, २०७८ | १२:३४:१३